tsena GmbH sy ny mpiara. KILAO: ny Vavahadin-tserasera ho an’ny biby Hafa dokam-barotra, ny biby Fiompy sy ny biby fiompy ny fomba Fijery avy any Alemaina. Ianareo dia hahita koa ny biby hafa ao amin’io biby izao tontolo izao. Tena fotsiny, ny fametrahana ny Biby puppies, ny saka, na soavaly, ambarao na mividy. Isika dia mampiasa ny tranonkala ny Mofomamy sy teknolojia hafa mba hanome anareo ny-miasa feno ny tolotra. Cookies mamela ny personalization ny votoaty sy ny mety ho voatendry ho playout ny dokam-barotra na ny tanjon’ny fanadihadiana. Amin’ny fanohizana ny fampiasana ny tranonkala, ianao manaiky ny fampiasana ny Mofomamy. Ho fampahalalana bebe kokoa, anisan’izany ny fomba mankarary Mofomamy dia afaka ho hita eo ny ho hitanao Eto ny Tanora-olona avy amin’ny biby Hafa mampiseho, an-trano sy ny Ny Biby Fiompy Classifieds. Masìna ianao tsindrio ny dokambarotra ho fampahalalana bebe kokoa, dia tsara amin’ny biby, satria izaho dia nanana ny alika sy ny ahy indray amin’ny faniriana. Izaho no tena biby namana. Mba hifandray Antonio avy Mannheim, afaka fotsiny dia tsindrio ny Rohy eto ambany. ary amin’izao fotoana izao, dia afaka mameno ny taona, ka ny taona any ivelany any India. Noho izany aho dia hitady asa ho an’ny tsy ampy taona. Aho dia afaka ny ho tena tsara ny biby. Mba hifandray Cedric avy Wunstorf, tsindrio fotsiny eo ny Rohy eto ambany. Tsy Hanambady, fa ny mba hanamafisana ny Ekipa mpilatsaka an-tsitrapo ho an’ny asa isan-karazany, ohatra, toy ny mpamily, Marika, saha asa, Alika Walker, fitehirizana ny fahana, etc. Misy ihany koa ny maro taps avy amin’ny fialam-boly tsy maintsy hanaiky ny fiompiana. Afangaro ny Sudheimer ary dia akoho. Price per biby isaky ny Euro. Akohovavy dia amin’izao fotoana izao TSY misy. Izaho tsy handeha hamaly ny andro rehetra momba ny PC, fa tia ny fangatahana rehetra. Ny haka toerana akaiky Gangelt Billy osy Antsoina hoe sombintsombiny, izay fiandohan’ Ny volana janoary, dia teraka. Tianay ny manao izao fiompiana avy amin’ny kely ny fialam-Boly, satria ny Fetra dia tonga. Ny biby miaraka amintsika ho ny taona iray manontolo any An-tokotany, ary manana be dia marin-toerana ary afaka malalaka sy mivoaka araka izay ilainao izany. Miaina ao anatin’ny lehibe ala, lemaka feno ahitra sy ny corral. Eto ianao dia afaka mahita ny tena tsara anefa voasarika Afangaro Wyandotten akoho avy amin’ny kely ny fialam-Boly-piompiana. Ny akoho no eo. foy ary nanomboka nitombo fatratra. Indrisy anefa fa, misy. Fotsiny ny fiofanana mba ho injeniera ao amin’ny Munich S-Bahn. Teo aloha nisy alika, ary noho izany traikefa tsara rehefa mifandray amin’ny alika.
Mba hifandray Markus avy Munich, tsindrio fotsiny eo ny Rohy eto ambany. sy ny fitiavana ny biby kokoa noho ny na inona na inona. Izaho manana saka. Mba hifandray Gianna avy Munich, tsindrio fotsiny eo ny Rohy eto ambany.
Te hanampy amin’ny ity fomba hafa saka tompony. Amin’ny Sieglinde avy Koblenz ny contact, tsindrio fotsiny eo ny Rohy eto ambany. Chipmunks amin’ny loko isan-karazany avy amin’ny fankatoavana ny fiompiana. Raha toa ka manana fanontaniana fotsiny. Valiny ihany koa toy ny hangataka ny toe-tsaina sy ny fiainana ny biby. Lavalava loner fianakaviana avy any Hamburg Blankenese croissants sy manolotra fanampiana ho antsika. Mba hifandray amim-pitiavana, Rebecca Rebecca, Judith, Isabel, avy any Hamburg, tsindrio fotsiny eo ny Rohy eto ambany. ary izaho dia mpianatra eto amin’ny Braunschweig levitra. Nihalehibe aho amin’ny alika sy ny tara-biby mampatahotra, raha toa aho eto amin’ny Braunschweig. Mba hifandray Cristina avy Braunschweig, afaka fotsiny dia tsindrio ny Rohy eto ambany. ary nanana biby Fiompy maro koa, izaho efa lehibe ny amin’ny biby. Manantena aho fa afaka ny hanampy ny olona iray dia mety angamba amin’izao fotoana izao tsy dia tsara ny. Mba hifandray Selina avy mba hihinana, tsindrio fotsiny eo ny Rohy eto ambany. feno lehibe, na antitra. Raha toa ianao ka liana, fotsiny ny ahy, anao sy ny tolotra dia report Efa-legged namana hihaona. Mba hifandray Anna avy amin’ny ala moor fotsiny dia tsindrio ny Rohy eto ambany. Izaho dia miaina amin’ny moka sy ny manolotra ny andro rehetra alika fikarakarana. Satria aho afaka manana trano lehibe amin’ny zaridaina lehibe, ny Fitiavanao ahy aoka eny etona. Manana ny tenanao. Mba hifandray Sabine avy maitso tendrombohitra sy ny moka fotsiny ianao dia tsindrio ny Rohy eto ambany. Amin’izao fotoana izao aho mpianatra tao amin’ny TUM. Izaho koa manana ny azy manokana ny alika. Izy no kely mongrel sy tena tony sy mety. Mba hifandray Nadine avy Munich, tsindrio fotsiny eo ny Rohy eto ambany. ary amiko io biby fikarakarana mandry indrindra fa satria efa afaka ny hanorina ny matoky ny biby ary be dia be ny voly. Mba hifandray Monique avy Leipzig fotsiny dia tsindrio ny Rohy eto ambany. Husky makorelina (izy no volana) no mety ho zava-Dehibe, koa, fa ny harena dia ho fantany amin’ny hafa ny alika) amin’izao fotoana izao aho bevohoka sy ny tsy miasa, noho izany aho. Mba hifandray Lisa avy any Hamburg, Alemaina tsindrio fotsiny ny Rohy eo amin’ny farany ambany
Raha NRI ny olona avy any India mba hanambady vehivavy Indiana ao amin'ny fanambadiana namboarina, inona no NRI vehivavy atao. Indiana Mampiaraka →